ब्युँतिँदै समाजवादी–राजपा एकता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
ब्युँतिँदै समाजवादी–राजपा एकता
तत्काल एकीकरण गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
भाद्र ८, २०७६ कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ — समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच धेरै अघिदेखि चल्दै–रोकिँदै आएको एकीकरण प्रसंग ब्युँतिएको छ । तत्काल एकीकरण गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
यही सिलसिलामा उनीहरूबीच शुक्रबार पनि छलफल भएको छ । समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निवासमा भएको वार्ता सकारात्मक रहेको राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरदसिंह भण्डारीले बताएका छन् ।
‘वैचारिक रूपमा दुई दलबीच सहमतिजस्तै छ, संगठन र व्यवस्थापनका कुरा कसरी टुंग्याउने भन्नेमा विविध कोणबाट छलफल जारी छ×,’ भण्डारीले भने, ‘सकभर चाँडै सहमति जुट्ने आशा छ ।’ राजपाले एकीकरणका केही आधारसमेत अनौपचारिक बैठकमा राख्दै आएको छ । त्यसप्रति समाजवादीले औपचारिक धारणा बनाइसकेको छैन । समाजवादीको भदौ ११ गते बस्ने पदाधिकारी बैठकमा राजपाका आधार र एकीकरणका मोडलबारे छलफल हुने भएको छ ।
समाजवादीका महासचिव गंगा श्रेष्ठका अनुसार पदाधिकारी बैठकपछि एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी अघि बढाइनेछ । ‘अहिले शीर्ष तहमा सामान्य छलफल भइरहेको छ, पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा एकताका विविधि पक्षमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि गठन भएको वार्ता समिति क्रियाशील ढंगले अघि बढ्छ ।’
समाजवादीले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र राजपाले अध्यक्षमण्डल सदस्य राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएका छन् । समितिले अनौपचारिक तहमा धेरै चरणमा संवाद गरे पनि औपचारिक वार्ता गर्न सकेको छैन । शुक्रबारको वार्तालाई पनि दुवै पक्षले अनौपचारिक छलफलकै रूपमा लिएका छन् ।
राजपा नेता भण्डारीका अनुसार समानताकै आधारमा पार्टी एकीकरण गर्ने छलफल अघि बढेको छ । राजपाले आन्तरिक छलफलका लागि एकीकरणका आधारसमेत तय गरेको छ । जसमा दुवै पार्टीका केन्द्रीय संरचना समानताका आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव राजपाको छ । यी दुवै पार्टीको राष्ट्रिय हैसियत उस्तै छ ।
प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीको एकतापछि दुवै पार्टीको सांसद संख्या बराबरी छ । प्रतिनिधिसभामा दुवै पार्टीका १७/१७ सांसद छन् । राजपाले एकीकृत पार्टीका केन्द्रीयस्तरका विभिन्न समिति बनाउँदा बराबरी हैसियत हुनुपर्ने र मर्यादाक्रमको एक नम्बरमा महन्थ ठाकुरलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक तहमा अघि सारेको छ ।
दुवै दलबाट आवश्यकताअनुसार वरिष्ठ नेता रहने, केन्द्रीय कार्यकारणी समितिमा दुवै पार्टीबाट बराबरी संख्यामा सदस्य रहने, दुवै पार्टीको एकीकरण घोषणा हुनुअघि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेजस्ता प्रस्ताव राजपाका छन् । वैचारिक मतान्तरको टुंगो एकता महाधिवेशनबाट निर्णय लिनेमा राजपा सहमतजस्तै छ ।
समाजवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको वकालत गर्दै आएको छ । राजपा संसदीय प्रणालीको पक्षमा छ । यी दुईबीचको वैचारिक भिन्नतालाई एकता महाधिवेशनमा लगेर टुंगो लगाउन सकिनेमा दुवै पक्षमा नेता सकारात्मक छन् । पार्टीको नाम राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी या समाजवादी जनता पार्टी नेपालमध्ये एक राख्न राजपाका नेताले सुझाएका छन् । झन्डा समाजवादी पार्टीको र चुनाव चिह्न राजपाको छाता राख्ने चर्चासमेत दुवै दलका नेताबीच चलेको छ ।
राजपा नेता भण्डारीले वार्तामा यी सबै विषयबारे छलफल नभएको दाबी गरे । लिखित ‘डकुमेन्ट’ आदानप्रदानसमेत नभएको बताए । ‘वार्ता समिति गठन गर्ने बेला समाजवादी पार्टीले पठाएको चिठीको जवाफ राजपाले दिएको छ, त्यसदेखि बाहेक अन्य लिखित डकुमेन्ट आदनप्रदान भएको छैन,’ उनले भने,‘फुटेजस्तो जुट्न सजिलो छैन ।’
भण्डारीले दुवै पार्टीका नेतामा तत्काल एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए । ‘यो एकीकरणको कुरा मात्रै होइन, वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियान पनि हो,’ उनले भने, ‘बहुल समाज भएको मुलुकमा दुई दलीय (नेकपा र कांग्रेस) शक्तिबाट मात्रै अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरता नहट्ने रहेछ, यसले शक्ति सञ्चय गर्ने र सरकार बनाउने काम मात्रै भयो, स्थिरता ल्याएन । त्यसैले पनि मुलुकमा वैकिल्पक शक्ति आवश्यक ठानेर हामी त्यो अभियानमा जुट्न लागेका हौं ।’
एकीकरण प्रक्रियालाई लिएर राजपाभित्र विवाद सुरु भएको छ । अध्यक्षमण्डलका चार सदस्यले तत्काल एकीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहे पनि संयोजक राजकिशोर यादव र पूर्वसंयोजक अनिल झा तयार भएका छैनन् । संयोजक यादवले महाधिवेशनअघि प्राविधिक रूपमै एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन कठिनाइ हुने तर्क गर्दै आएका छन् । अर्का अध्यक्ष झा राजपालाई समाजवादी पार्टीमा विलय गराउन खोजिएको आशंका व्यक्त गर्छन् ।
शुक्रबारको वार्तामा समेत यी दुई नेतालाई बोलाइएको थिएन । समाजवादीले चार शीर्ष नेतृत्वलाई मात्रै छलफलका लागि बोलाएकाले वरिष्ठताका आधारमा चार नेता सहभागी भएको राजपाका एक पदाधिकारीले बताए । ‘सिनियरबाट चार जना सहभागी हुने भनिएकाले यादव र झा नपर्नुभएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अन्य कुनै नियत होइन ।’
६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलमा झा र यादव क्रमशः पाँचौं र छैटौं वरीयतामा छन् । झाले संयोजकलाई वार्ताबारे थाहा नदिइनु गलत नियत रहेको बताए । ‘पार्टीका संयोजकलाई थाहै नदिई कसरी वार्ता भयो ? केका लागि र कसका लागि एकीकरण गर्ने हो ? संयोजकलाई थाहा हुनुपर्दैन ? संयोजक नभएको वार्तालाई संस्थागत मान्न सकिन्न, त्यो व्यक्तिगत छलफल मात्रै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा भएको छलफललाई कसरी वार्ता भएको भनेर मान्ने ?’
उनले वार्ता प्रक्रिया गलत भएकाले आफू त्यसमा सहमत नभएको बताए । संयोजक यादवले सैद्धान्तिक रूपमा एकीकरणको पक्षमा आफू भए पनि प्रक्रिया गलत भएको बताए । ‘नीतिगत रूपमा एकताको विरोधी हैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया गलत नहोस् भन्ने हो ।’
वार्तामा समाजवादीबाट यादवका अतिरिक्त संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, सहअध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिव गंगा श्रेष्ठ तथा राजपाबाट अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरदसिंह भण्डारी सहभागी थिए ।
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०९:१६
मलेसिया खोल्न भदौ अन्तिम साता बैठक
काठमाडौँ — १५ महिनादेखि बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउन भदौ महिनाभित्र क्वालालम्पुरमा दुई देशीय बैठक हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेर नामावली पठाएपछि दुई देशीय बैठक हुन लागेको हो ।
मन्त्रालयले साउन २१ मा सूचीकृत नाम मलेसिया पठाएको थियो । मलेसिया सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड र निर्देशिका पूरा गरेको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा यी संस्था छानिएका थिए ।
‘मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले संयुक्त कार्यदल बैठक सेप्टेम्बर दोस्रो साता गर्ने जानकारी गराएको छ,’ मलेसियास्थित राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।
कार्यदल बैठकमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव विनोद केसीसहितका पदाधिकारी क्वालालम्पुर
जाने भएका छन् । नेपालले पठाएको स्वास्थ्य संस्थाको सूची र तोकिएको मापदण्डबारे द्विपक्षीय छलफल भएपछि सहमतिका आधारमा मलेसिया रोजगारीखुल्ने श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
गत वर्ष जेठ २ मा श्रम मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा तोकिएका संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाएपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो । गत कात्तिकमा श्रम सम्झौता भएपछि बायोमेडिकल गर्ने संस्था छनोटमा ढिलाइ भएकै कारण रोजगारी खुल्न सकेको थिएन ।
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०९:०४
अंग्रेजी, गणित र विज्ञान पढाउन स्वयंसेवक